China Portable ngwa-ngwa ngwa ngwa ụdị ihe nkwụnye mgbidi eriri USB chaja PD 18W rụpụta na ụlọ ọrụ | Eletriki Electric
*Chaja PD 18W Nkọwa nkọwa
Ihe ngwugwu 18W PD a kọmpat na nnyefe USB-ike pụtara ngwa ngwa ngwa maka ngwaọrụ gị. Emere chaja a na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ iji nyefee 5 ugboro ike nke chaja ọkọlọtọ na ngwaọrụ 2 n'otu oge.
Igosiputa ihe omuma ohuru ohuru na teknụzụ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ, nnyefe ike USB-C na nkwụnye ụgwọ ngwa ngwa, otu chaja a bụ naanị ihe ịchọrọ iji mee ka ngwaọrụ gị dị ugbu a wee nọrọ n'ihu usoro maka eletrọniki ọ bụla. Portsgbọ mmiri abụọ ahụ nwere ike inyefe 18W nke ụgwọ ọkụ dị elu na ihe niile site na smartphones na mbadamba na laptọọpụ USB-C ike agụụ na-agụ dị ka Macbook 12-inch. Na-akwado ngwa ngwa ụgwọ maka iPhone na-ana iPhone 8 ma ọ bụ mgbe e mesịrị site na efu ka 50% na 30 nkeji na gụnyere USB, na ngwaọrụ ndị ọzọ na ezigbo gbapụrụ ọsọ.?
Ezubere iji bụrụ enyi-enyi, chaja USB PD chaja a na-adaba adaba na gburugburu ebe obibi ma ọ bụ mgbe ị na-apụ. Chaja a na-ebu kọmpụta na mgbidi ga-adaba ngwa ngwa n'azụ arịa ụlọ ma ọ bụ na ebe siri ike iru. Ọ dịkwa oke nha nke dabara adaba na akpa ma ọ bụ akpa, nke pụtara na ị ga-enwe ohere ịnweta ngwa ngwa ebe ọ bụla ị na-aga. Fast PD chaja na mma na a pụrụ ịdabere na-mgbochi nke overvoltage, overcurrent, overheat na obere circuit.
PD chaja mgbidi na ndakọrịta na mgbanwe dị elu, ihe ngwọta abụọ na-enwe ike ịkwado ngwaọrụ USB (A / C) niile dị ka ekwentị na mbadamba iji rụọ ọrụ ma ọ bụ n'otu oge. Ihe nkwụnye mgbidi USB na nhazi nkwụnye mgbanwe na-enye gị ohere izere igbochi mkpọchi ndị ọzọ ma weghachite ọdụ ụgbọ mmiri USB A / C maka ntinye dị mma nke eriri ejikọrọ - ọkachasị bara uru mgbe ị na-eji eriri ike ma ọ bụ onye na-eche nche na ọtụtụ ntanetị. USB PD chaja mgbidi na Ike kesaa ike maka ngwaọrụ.
*Mgbidi chaja 18W Parameter
Ike nzipu ngwa ngwa PD Wall chaja
Nye ekwentị gị na mbadamba gị niile (gụnyere iPhone na iPad) na-agba ọsọ ngwa ngwa, na nnyefe ike na-enye ụgwọ ọsọ ọsọ.
Ndakọrịta & Mgbanwe USB nkwụnye chaja
Abụọ na-otu Nchaji ngwọta na bụ ike nke na-akwado niile USBC na USBA kwadoro ngwaọrụ dị ka iPhone, Samsung na ndị ọzọ na USBC ngwaọrụ na-arụ ọrụ ma n'adabereghị ma ọ bụ n'out oge.
Nchekwa & Pụrụ ịdabere Mobile PD Fast chaja
Teknụzụ kachasị ọhụrụ na-akwalite arụmọrụ na-arụ ọrụ ma melite mgbasa ọkụ nke na-echebe ngwaọrụ megide oke oke ugbu a, ikpo oke ọkụ, na ịba ụba.
Ihe nkwụnye chaja USB Portable na foldable
Were ụgwọ ebe ọ bụla gị na akpa gị enyi na enyi na plọg foldable, ụdị kọmpụta dị oke ọnụ na mpịachi mpịachi hụ na enwere ike ịga ebe ọ bụla ị na-aga.
Nke gara aga: New multi mgbidi n'ọdụ ụgbọ mmiri ngwa ngwa ụgwọ foldable eriri chaja PD30W
Osote: SVR-172 Series (0.5kVA-5kVA) laydị Ntugharị tagedị Voltaji nwere Ngosipụta Agba